OWAY RIDE ကိုအသုံးပြုသူများလာ! မြန်မာမှာ OWAY RIDE ကိုသုံးပြီး DRIVER ကို INTERVIEW ကြည့်တယ် | Myanmar Tech Press
နည်းပညာဆိုင်ရာ application များ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ
OWAY RIDE ကိုအသုံးပြုသူများလာ! မြန်မာမှာ OWAY RIDE ကိုသုံးပြီး DRIVER ကို INTERVIEW ကြည့်တယ်
2017-05-09 2018-04-06 Admin တက္ကဆီဝန်ဆောင်မှု, မိုဘိုင်းလ် app, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Image Source : https://www.facebook.com/owayride/
မေလ(၇)ရက်နေ့၊ SUNDAY ရဲ့ ညနေပိုင်းမှာ TAXI အငှား SERVICE တစ်ခုဖြစ်တဲ့ OWAY RIDE ကိုသုံးကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသွားအလာကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့ DRIVER ကိုအောင်ကိုသူကတော့ DRIVER အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)လလောက်ကတည်းက OWAY RIDE ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လျှောက်ခဲ့ပြီး SERVICE အသုံးပြုမှုကို စတင်ခဲ့တာပါတဲ့။ မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ SAFTY DRIVE SERVICE နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ SERVICE TRAING အတွက် တစ်ရက်ကို (၄)နာရီလောက်နဲ့ (၃) ရက်ဆင်းလိုက်ရပါတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
“အစတည်းက ခရီးသည်တွေအများကြီး မရခဲ့ပါဘူး၊ စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အချိန် (လွန်ခဲ့တဲ့၅လ)လောက်က OWAY RIDE မှတစ်ဆင့် သွားကြိုရတာက တစ်ရက်မှာ ၂ခု ၃ခုလောက်ဘဲရှိပါတယ်၊ အကုန်လုံးနီးပါးက (သမရိုးကျ) လမ်းသွားရင်းနဲ့ပဲ ငှားတာများခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ OWAY RIDE မှတစ်ဆင့်ငှားသူကများလာပြီး အခုအခါမှာတော့ တစ်ရက်ကို ( ၁၀)ခုကနေ(၁၅)ခုလောက် OWAY RIDE မှတစ်ဆင့်ငှားစီးသူရှိလာပါတယ်”လို့ သူကပြောပြပါတယ်။
ငှားစီးသူတွေများလာပြီး ORDER တွေကများလာတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့(၁)နေ့အလုပ်လုပ်ချိန်ကို ပေါင်းလိုက်ရင် “မနက်(၈)နာရီကနေည (၁၀)နာရီထိ စုစုပေါင်း (၁၂)နာရီလောက် နေ့တိုင်းနီးပါးTAXI မောင်းနေရပါတယ်”လို့ဖြေပေးပါတယ်။ လွတ်လပ်နေတဲ့ TAXI DRIVER ထဲမှာ အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီး လုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။
APP ကိုကြည့်လိုက်တော့ ဒီ(၅)လအတွင်း OWAY RIDE နဲ့ အော်ဒါ(၇၀၆)ခုကို မောင်းပို့ပေးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ပျမ်းမျှတစ်လကို (၁၄၀)ကြိမ်၊ တစ်ရက်ကို (၅)ကြိမ်ဆိုပြီး တွက်လို့ရပါတယ်။ ဒီဟာနဲ့ညီပြီးသမရိုးကျဖြစ်တဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာ တားစီးတာလည်းပါမယ်။
“အခုအချိန်မှာတော့ လမ်းသွားလမ်းလာတားစီးတာက တစ်ရက်မှာ(၃−၅) ကြိမ်လောက်လျော့ပြီး OWAY RIDE နဲ့ငှားတာက ပိုများလာတယ်။ နောက်လတွေအတွက် တွေးရင်လည်း မိုးရာသီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ ဒီ SERVICE ကိုသုံးစွဲသူ များလာနိုင်ပြီးတော့ ရေရှည်ကိုကြည့်ရင်လည်း သုံးစွဲသူ ဒီ့ထက်များလာလောက်တယ်”ဆိုပြီးသူပြောခဲ့ပါတယ်။
ပထမယာဉ်စီးခက 1,500 ကျပ်၊ 1 ကီလိုတိုင်းမှာ 270 ကျပ်ကပေါင်းထည့်ပေးတဲ့ SYSTEM ပဲဖြစ်ပါတယ်။ DRIVER က OWAY RIDE ရဲ့ SYSTEM သုံးစွဲခအနေနဲ့ အခွန်ရဲ့ ၁၀%ကို ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသည်ရတဲ့ ကားသမားရော၊ မရတဲ့ ကားသမားရော အဲ့လိုပဲ ပေးဆောင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရသူတွေရဲ့အသံကို ပြောပြဖို့အတွက် DRIVER တစ်ယောက်ဆီကနေ နားထောင်ထားတာကို အခြေခံပြီးရေထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပြီး ဟုတ်မှန်မှုကိုတော့ ဖြည့်တွေးပေးစေချင်ပါတယ်။
GUEST WRITER:桂川融己 (Katsuragawa Yuki)
ရန်ကုန်မြို့အတွက်မရှိမဖြစ် Taxi ၀န်ဆောင်မှု
Uber ရဲ့ promotion ကတော့အံ့မခမ်းပါဘဲ!
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး YBS အတွက် လမ်းညွှန်မိုဘိုင်းလ်အပလီကေးရှင်းများ
← MasterCard မှ အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့လက်ဗွေခရက်ဒစ်ကဒ်
တရုတ်မိန်းကလေးများရဲ့ live Video ၀န်ဆောင်မှုစျေးကွက် တစ်ဟုန်ထိုးကျယ်ပြန့်လာ →